Wararkii Maanta ee shirka Nairobi.
iyadoo qaabka shirku usocda ay hoosayso ayaa haddana waxaa ergadda shirka ay udiyaar garoobayaan wajiga sadexaad ee wada hadalada marka laga gudbo muranka iyo ismarinwaaga ka taagan gudiga axdiga iyo qaabka dawladeed ee ay yeelan doonto natiijada shirka kasoo baxda.
wajiga sadexaad waxaa hortaagan labo gudiga axdiga ee dastuurka soomaaliya diyaarinaya oo ilaa iyo iminka aan soo gaba gabayn shaqdisii ,halka gudiyada kale ee shanta ah ay dhamaystireen.
Gudoomiyaha Gudiga farsamada IGAD Bethwel Kiblagat ayaa dhowaan sheegay in uu rajo wanaagsan ka qabo in laga gudbo murankaas si wajiga 3aad loo guda galo, waxaana isla markaas uu ugu baaqay dhamaan hogaamiyayaasha maqan in ay kasoo qaybgalaan shirka si ay doodooda ugu biiriyaan hogaamiyayaasha oo maalmahanba aad uga doodaya arimaha dastuurka iyo iswaafajinta qoraaladda 6da ah oo ay ku shaqayn doonto dawladda halkan ka dhalata.
gudiyada kale waxaa kamid ah hanti isu celinta iyo hub ka dhigista oo si wanaagasn usoo khatimay warbixinadoodii soo jiitamayay tan iyo eldoret.
wakiilada qaramada midoobay Tubman iyo midawga reer yurub waliid musa ayaa dhinaca kale shir jaraaid ku sheegay in bisha jun lagu wado gunaanadka shirka, waxaa kaloo ay sheegeen in beesha caalamka ay gacan siin doonto dawladda halkan kasoo baxda iyagoo sheegay in dhibaatada shacabka soomaaliyeed ay aad usii badatay.
hadaba iyadoo arimahan ay jiraan ayaa waxaa soo baxaya is gaashaan buuraysi dhex maraya qaar kamid ah xubnaha ergada oo horay ugu kala tagsanaa siyaasadda iyo kuwo sii kala fur furmaya oo dhexdooda isku kacay.
SRRC ayaa todobaadkan afhayeen u hadlay waxaa uu sheegay in xiriir fiican ay la samaysteen mas'uuliyiinta DKM ee kala ah Raisul wasaare Xasan abshir iyo afhayeenka baarlamaanka cabdalla deeroow isaaq hase yeeshee faah faahin kama bixin kulamo la sheegay in ay la yeesheen madaxwaynaha Puntland Col.Cabdulaahi Yusuf.
dhinaca kalana xurguftii dhexmaratay madaxwayne cabdi qaasim salaad xasan iyo wakiiladiisa halkan ujooga ayaa baryahan xubhana TNG ay ka fadhiisteen sidii loo xalin lahaa.
Hogaamiya yaasha G8ka ayaa wali shirka iaygu quud daraynaya waxaana ay ku andacoonayaan in dawladda itoobiya ay fara kulul ku hayso shirka soomaalida ,isla markaana niyad wanaag ay u qabaan shirka kama muuqato.
SOMALITALK.COM | April 20, 2003